Misy ny Boky Torolàlana Debian amin'ny Espaniôla Avy amin'ny Linux
Jonathan | | Fitsinjarana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Raphaël Hertzog iray amin'ireo mpamorona manan-danja indrindra an'ny Debian, dia namoaka tamin'ny pejy voalohan'ny Boky torolalan'ny Administrator an'i Debian ny dikanteny nadika Espaniônera momba ity boky torolàlana mahafinaritra ity sy ireo fandikan-teny mandroso indrindra amin'ny fiteny hafa.
Ka na iza na iza te-hahafaly ny manandrana an'i Debian dia efa voadika amin'ny fitenintsika ity boky tsara ity, ary ny tsara indrindra dia misy ohatra azo ampiharina hanamboarana ireo lafiny samihafa amin'ny rafitray, toy ny fiarovana. Faly tokoa ny fandefasana ny Debian Wheezy miaraka amin'ny boky fampianarana amin'ny antsipiriany tafiditra ao amin'ny Espaniôla ampiasaina sy hitantanana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Boky toro-lalana Debian azo alaina amin'ny Espaniôla
Ary rahoviana, rohy mankany amin'ny volavolan'ilay boky ho an'ny wheezy
Misaotra ny boky. Manantena aho fa ho vita tsy ho ela io fanontana io alohan'ny hahatongavan'ny old Wheezy.
Misaotra fa efa nampidina azy aho, io no notadiaviko, misy lohahevitra maro (saika ny rehetra) mahaliana ahy izao, mila mamaky fotsiny aho.
Eny, feno tokoa izy io. Ankafizo tsara Juanra.
Manana Debian + KDE ve ity takelaka ity? 😮
Tsy mampiasa Debian aho izao fa ampidino! 😀
Amin'ity sary ity dia mieritreritra aho fa na ny kaopy aza dia manana an'i Debian ...
Na ny solomaso aza ...
Ha, na ny Tux an'ny mpivarotra boky aza dia kilalao Furby 😉
Heveriko fa ity sary ity dia fanehoana an'ity tontolo mifanila ity, izay i Debian no rafitra miasa be mpampiasa indrindra (amin'ny tena fiainana, pikantsary OSX bebe kokoa no apetraka amin'ny pejin-tranonkala famolavolana rehetra afa-tsy ireo izay mampiasa Windows na rafitra hafa).
lazao amiko raha tsy diso aho fa mahita debian amin'ny takelaka aho, ahoana no hametrahako debian amin'ny takelaka?
keopety dia hoy izy:
Handinika ny fametrahana debian amin'ny takelaka aho, misaotra
Mamaly an'i keopety
Efa nakariko omaly, kinova epub ary niara-niasa kely, tsy himenomenona daholo izany, ankoatry ny filazana fa tsy feno ilay kinova pdf, tsy nanelingelina ny nanamarina azy aho
Afaka mizara ny .epub ve ianao? ..
Mahafa-po. Misaotra betsaka anao nizara azy.
Tongasoa ianao Nuadera. Manantena aho fa hitanao fa mahasoa azy io ary tena tianao ilay izy.
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra ary iza no nameno ny fanoratana rehefa nandefa ny lohahevitra hojerena aho.
Vao nampidina azy aho, ary ny hany hitako hatreto dia ny isan'ny pejy ao amin'ny index XD. Misaotra, fandraisana anjara tena tsara.
Daniel Gutierrez dia hoy izy:
Tena tsara izy io ary tena azo ampiharina indrindra ho ahy izay miditra amin'ny tontolo debian satria ny orinasa izay iasako dia hampihatra an'i debian Wheezy amin'ny mpizara, izy io dia ho ampahany amin'ny fanatsarana matihaniko… ..misaotra anao namoaka azy
Valiny tamin'i Daniel Gutierrez
Miarahaba ny rehetra, ary misaotra betsaka, firavaka fefy amin'ny boky, nitady zavatra matotra sy mandaitra aho, misaotra betsaka avy amin'ny fo.